Ny dingana 4 mankany amin'ny marketing amin'ny media sosialy | Martech Zone
Ny dingana 4 mankany amin'ny varotra haino aman-jery sosialy
Alakamisy 14, 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Iray amin'i Stephen Covey's Ny fahazarana 7 an'ny olona mahomby be: lesona matanjaka amin'ny fanovana manokana is to Atombohy amin'ny farany ao an-tsaina. Ity infographic avy amin'ny BigThunk ary Serasera laharana faha-8 dia manao izany fotsiny - manaiky fa mila mametraka ny tanjonao aloha ianao rehefa mijery ny paikadim-barotra amin'ny haino aman-jery sosialy.
Tena tiako ity infographic ity satria tsy miresaka momba ny fiovam-po fotsiny izy io - fa miresaka amin'ny iray hafa fampiasana orinasa amin'ny media sosialy: Fivarotana marika, Leaderhsip eritreritra, serivisy ary serivisy amin'ny varotra. Ny ankamaroan'ny tanjaky ny media sosialy dia tsy avy amin'ny fanerena avy hatrany… fa ny echos sy ny volavola izay natsangana rehefa mandeha ny fotoana.
Tags: Fahazarana 7Fahazarana 7 misy olona tena mahombyatombohy amin'ny farany ny ao an-tsainabigthunksteven covey
Optimizer an'ny tranokala Visual: Mampitombo ny varotra sy ny fiovam-po
Jereo, zahao ary hatsaraina ny laharam-pahamehanao amin'ny finday
14 Novambra 2013 à 8:27
Misaotra nizara Doug! Tena namaky tena tsara aho, tena mampahafantatra…